Apple iPhone Xs famerenana: Maivan-danja sy mora lafo fa ny Xs tsara kokoa noho ny iPhone Xs Max?
Ny fanombatombana ny vidiny rehefa averina averina VAT 999inc
Ny iPhone Xs dia telefaona tena tsara, fa raha handany izany betsaka ianao dia mety handeha iray tsara kokoa ary hahazo ny Xs Max fa tsy
Tsaratsara kokoa noho ny fakantsarin'i XGreat iPhone sy ny lahatsary mahavariana ny loko volamena dia toa mahafinaritra mahafinaritra ho an'ny smartphone 5.8in
Ny Apple iPhone Xs dia mety ho voavolavola amin'ny iray, fehezanteny fohy, ny fehezanteny: io dia antso an-tariby mitovy amin'ny Apple iPhone Xs Max, saingy miaraka amin'ny efijery kely ary kely kokoa batterie.
Izany no tena ilainao ho fantatra, na dia azonao aza ny sary feno izay tsy maintsy aleo, vakio ny pejiko Xs Max famerenana, ary avy eo dia hijery ny sary tsara tarehy. Tsy handao izany amin'ny fomba mazava aho, mazava ho azy, satria tonga eto ianao hamaky ny famerenana ny iPhone Xs ary izany indrindra no ho azonao.
Apple iPhone Xs famerenana: Ny zavatra tokony ho fantatrao
Andeha isika haka izany avy any ambony. Ny Apple iPhone Xs dia iray amin'ireo finday telo natsangan'ny Apple tao amin'ny 2018, ary mipetraka eo afovoan'ny sehatra amin'ny endri-javatra, ny vokatra ary ny vidiny. Ao amin'ny "ambany" misy ny 2018 iPhone dia ny iPhone XR, izay ny iPhone mora indrindra, dia manana ity finday ity ianao - ny iPhone Xs - raha eo an-tampon'ny sehatra dia ny iPhone Xs Max.
Mba hijery izany, ny iPhone Xs dia mitovy amin'ny 2017 iPhone X, izay efa nisotro ronono i Apple ankehitriny. Izy io dia mitovy amin'ny fanolorana ny AMOLED 5.8in manoloana, mitovy ihany koa ny halehibe sy ny elanelana eo an-tampon'ny efijery. Sarotra be izany saingy tsy mahamarika izany.
Raha ny marina dia ho afaka hilaza ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPhone X sy ny iPhone Xs ianao raha a) mijery akaiky tokoa ny fametrahana ny fandefasana plastika antena, izay nafindra na b) manana ny dikan-teny volamena, izay mijery Tena mahafinaritra tokoa eny an-dalana.
Ny fanalahidy rehetra amin'ny fiovan'ny Xs dia tsy hita maso amin'ny maso tsy mitongilana. Misy fakantsary mivoatra kokoa, fifandraisana 4G haingana kokoa, fiainam-piofanana tsara kokoa sy haingam-pandeha haingana kokoa, izay hiditra ao amin'ny antsipirihany bebe kokoa kokoa ity fanavaozana ity.
Apple iPhone Xs manamarina: ny vidin'ny fifaninanana
Zavatra iray tsy miova amin'ny iPhone X hatramin'ny iPhone Xs, na izany aza, ny vidiny. Ny fanovana amin'ny 64GB an'ny tahiry dia £ 999, miaraka amin'ny fandaniana amin'ny £ 1,149 ho an'ny 256GB iPhone Xs sy £ 1,349 ho an'ny 512GB iPhone Xs.
Izany no mahatonga azy ho lafo kokoa noho ireo mpifaninana Android rehetra, na dia amin'ny vidiny fototra aza. Ny £ 100 lafo kokoa noho ny Samsung Galaxy Note 9, manodidina ny £ 200 lafo kokoa noho ny Samsung Galaxy S9 + ary Huawei P20 Pro, ary mihoatra ny avo roa heny ny vidin'ny tsy mampino OnePlus 6.
Izy io ihany koa ny £ 250 pricier noho ny iPhone iPhone XR - izay mitranga ihany koa ny fampisehoana lehibe - fametrahana ny iPhone Xs amin'ny toerana tsy dia mazava loatra. Ny "100" ihany no "mora" raha oharina amin'ny iPhone Xs Max, izay misy ny efijery lehibe sy ny endri-javatra rehetra, nefa mbola lafo kokoa noho ny ankamaroan'ny mpanohitra izany.
Hividy Apple iPhone Xs avy amin'i John Lewis androany
Apple iPhone Xs dia mijery: Ny endrika sy ny endri-javatra manan-danja
Tsy midika izany fa ny iPhone Xs dia telefaona ratsy. Fa misy ihany koa ireo telefaona hafa manana fahaizana manokana amin'ny vidiny ambany. Na izany aza, ho an'ireo izay maniry iPhone fotsiny, ny Xs dia maneho ny dingana mendrika amin'ny iPhone X amin'ny endri-javatra sy ny fampisehoana, raha tsy mamorona.
Raha ny marina, ny fahasamihafana ara-batana eo amin'ny X sy ny X dia ny fametrahana ireo andian-tariby plastika manodidina ny sisiny. Tao amin'ny iPhone X no napetraka teo amin'ny tendron'ny lava lava sy ny tendrony; Ao amin'ny iPhone Xs dia misy teboka roa fanampiny, ny iray eo amin'ny sisiny farany mankany ankavanana ary ny iray eo amin'ny farany ambany mankany ankavia.
Ny ankamaroany dia tsy mahatsikaritra ny fahasamihafana fa, ho an'ireo izay mihevi-tena mifanaraka amin'ny sariohatra, ny sisiny ambany amin'ny iPhone dia manjary mitazam-pijery miavaka tsara, miaraka amin'ny lavaka lava lava mankany ankavia amin'ny seranana kely ary enina miankavanana. Izy io koa dia napetaka amin'ny loha somary somary mafy kokoa sy maivana ary somary vaky, ka hoy Apple, eo anoloana sy aoriana.
Raha tsy izany, dia mitovitovy izy io sy mavesatra toy ny iPhone X, miaraka amin'ny bonus fanampiny amin'ny fanamafisana kokoa ny rano. Mbola voahodina izy io miaraka amin'ny loko marevaka matevina, mifangaro loko, raha oharina amin'ny lozanao amin'ny fanaovana fandidiana am-bohoka miaraka aminy. Ary ny efijery dia mbola mameno ny ankabeazan'ny ampahany amin'ny fitaovana, miaraka amin'ny boribory mainty matevina manaloka azy io ary ny tranokely trano ny "True Depth" sy ny fakan-tsary selfie telefaona no mihinana ao amin'ny efitranonao miaina eny an-tampony.
Indrisy, tsy misy fiverenana amin'ny mpamaky fingan-tsandry amin'ity taona ity; Fa ratsy kokoa noho izany, Apple dia tsy nanatsara ny mekanika amin'ny fanakanana ny finday ao amin'ny iOS 12. Tsy afaka mijery fotsiny ny telefaona ianao raha te hamoha azy mivantana any amin'ny trano fonenana; Misy takelaka fanampiny miakatra fanampiny, izay toa tsy ilaina.
Apple iPhone Xs famerenana: Asehoy
Tahaka ny amin'ny iPhone X, ny fampiratiana 5.8in dia tena tsara. Mampiasa ny teknolojia AMOLED izy io, ka ny solon'ireo sary peta-drindrina rehetra dia manana loharano mazava. Izany dia midika hoe lavorary lava, inky mainty sy mifanohitra tanteraka.
Ny famokarana loko eo amin'ny efijery dia mahavariana koa, mamely ny fifandanjana eo amin'ny satroboninahitra eo amin'ny maso sy ny fahamoran'ny loko. Tao anatin'ny fikarohana ara-teknika miaraka amin'ny colorimeter, dia nahatratra ny fandrakofam-peo 96.1% ny gamut loko sRGB tao amin'ny navigateur, ary nipoitra tamin'ny hazavana 668cd / m2 (166cd / m2 ambony amin'ny iPhone X). Ity farany dia tarehimarika miavaka amin'ny AMOLED, izay ahafahana mamela ny efijery miverimberina amin'ny ankamaroan'ny fepetra, eny fa na dia tena mazava tsara aza ny masoandro.
Ny tarehimarika dia mety tsy midika ho zavatra mahatsiravina ho anao, fa ny zava-misy dia manana ny fanohanana tanteraka amin'ny HDR10 sy ny fari-pitsipika Dolby Vision. Tsy hanohana ireo fenitra ireo amin'ny taratasy misy ny lalàna izy ireo, indrindra raha ny hamariparitana tampoka, fa afaka milaza aho fa ny lahatsary misy ireo karazana roa ireo ao amin'ny Netflix sy ny YouTube dia tena manintona tokoa. Ny loko dia toa mitsambikina avy eny amin'ny sisin'ny efijery, ary manasongadina ny lokony sy ny lamaody amin'ny fomba mahavariana mahatalanjona.
Raha fintinina, dia tena mamirapiratra ny fampisehoana ny iPhone. Mbola manana fanamafisam-peo tena tsara tena tsara nataon'i Apple izany, izay mampifanaraka ny lanjan'ny fotsy izay hita amin'ny efijery amin'ny hazavana manjopiaka, ary ny Night Shift, izay mampihena ny hazavana manga. Ny fahadisoam-panantenana anefa dia i Apple no nanosika ny fanamafisam-peo hiova ho azy avy amin'ny sehatra fototra ao amin'ny menu Accessibility. Mazava loatra fa tsy maninona ny mpanjifa manakana io safidy io sy ny fiantraikany amin'ny fiainana an-trano.
Apple iPhone Xs famerenana: Performance
Ny fahombiazan'ny iPhone Xs dia mahavariana tahaka ny kalitaony. Toy ny mahazatra, ny kitapo finday vaovao ao Apple, ny A12 Bionic, dia maneso ny rehetra ao anatin'ireo fepetra. Mora kokoa noho ny iPhone an-tsarobidy tamin'ny herintaona sy ny haingam-pandeha Android haingana tamin'ity taona ity, ary mihatra amin'ny asa sy ny CPU-intensive izany.
Toy ny mahazatra dia tsy hahita ny taham-pamokarana haingana kokoa noho ny 60fps amin'ny lalao satria ny tahan'ny 60Hz amin'ny telefaonin'ny telefaona dia toy izany. Saingy ny vokatra GFXBench misokatra dia mampiseho fa ny iPhone Xs dia afaka manatsara ny fampisehoana ny modely farany amin'ny taona lasa - ary ny fampisehoana bebe kokoa isan-taona noho ny smartphone hafa rehetra eny an-tsena.
Mila an'io fampisehoana io ve ianao? Mety tsy izany. Tsy mbola misy na oviana na oviana izay manaparitaka ny iPhone X, avelao ny iPhone Xs, fa tokony hiantoka izany, satria i Apple dia manavao ny rindrambaiko ao anatin'ireo taona ho avy, fa mbola manohitra ny fahanginana. Nifindra ny rantsantanana.
Ny manan-danja kokoa noho ny tarehimarika azo tsapain-tanana dia andro iainana ny fiatrehana ny fiaramanidina, ary ny chip vaovao - natsangana tamin'ny fomba famokarana 7nm mahomby - manampy ny kely kokoa iPhone Xs mila fiovana tena ilaina.
Mbola tsy mahatalanjona sy maharitra 12hrs 45mins ao amin'ny test video misy antsika. Izany dia mametraka azy ao ambadiky ny Xs Max, ny Samsung Galaxy S9, ny Huawei P20 Pro ary ny OnePlus 6. Saingy maharitra kokoa noho ny 2017 iPhone X izany. Ny olana ho an'i Apple dia satria ny mpamokatra hafa dia manangona sy manomboka mamokatra ny findainy manokana ao amin'ny 7nm, dia mety hiha-lehibe indray ireo banga ireo.
Apple iPhone Xs famerenana: Camera
Tsy misafidy ny iPhone Xs mihoatra ny Xs Max ianao raha te ho tsara kokoa ny fiainan'ny pilina, avy eo, fa farafaharatsiny tsy misy fahasamihafana eo amin'ny roa fakantsera raha misafidy ny iPhone mora kokoa.
Midika izany, ao amin'ny iPhone Xs, ianao dia mahazo kamerà 12-megapixel ao ambadika. Ny iray dia mivelatra ary ny iray hafa dia televiziona 2x, izay miorina amin'ny endriny tsara indrindra, miaraka amin'ny fahitana ny autofocus ary ahitan'ny flash iray quad-LED. Ny fakantsary voalohany dia manana sensor lehibe miaraka amin'ny pixel 1.4um ary ny loko miavaka f / 1.8, raha ny fakan-tsary faharoa dia manana sensor kely kokoa miaraka amin'ny pixel 1um ary ny dimmer XMLXXXXX.
Azonao atao ny mandefa sary vetaveta 4K mihetsika amin'ny kamera aoriana ao amin'ny 60fps, ary ny mpamantatra lehibe kokoa amin'ny fakantsary voalohany dia midika fa ny fakan-tsarimihetsika dia mety hahatratra ny laharam-pahamehana lehibe kokoa noho ny iPhone X. Tsy hoe ratsy ny X: talohan'ny namoahana ireo iPhones vaovao, ny fakan-tsary tena tsara indrindra amin'ny smartphone rehetra. Saingy tsara kokoa ireo finday vaovao, maka sary amin'ny lahatsary miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Miatrika ny eo aloha, eo anelanelantsika, isika dia manana fakantsary Selfie 7-megapixel miaraka amin'ny aperture ny f / 2.2 ary ny fahafahana mampihatra ny fampiofanana video, izay tsy azon'ilay iPhone X atao. Ny fakan-tsarimihetsika manoloana ity taona ity dia afaka manoratra ny sarimihetsika 1080p amin'ny 60fps, hatramin'ny 30fps.
Raha mikasika ny kalitao mena, dia mitovy daholo ny fitsaràna rehetra amin'ny iPhone Xs amin'ny iPhone Xs Max. Tsara kokoa, saingy kely. Ny sary amin'ny hazavana tsara dia manana ampahany maromaro kokoa amin'izy ireo, ary amin'ny antsipirihany sy ny endriny. Tsara kokoa kely amin'ny hazavana ambany ihany koa izany.
Sary 10 an'ny 12
Ny iPhone Xs dia mbola tsy tsara toy ny fananganana ny Huawei P20 Pro. Izany dia eo amin'ny sehatra lehibe indrindra amin'ny P20 Pro mahatalanjona 40-megapixel voalohany fakantsary sy kisary fahatelo fakantsary fikirakirana, izay manome ny zoom zara raha misy amin'ny 3x sy ny 5x magnifications.
Araka ny efa nolazaiko, ny fisamborana horonan-tsary dia tena mahasosotra, fa tsy ny antsipiriany, ny taham-pahaizana ary ny fampiofanana izay mahatalanjona. Ny fakantsarin'ny iPhone Xs koa dia mifanentana tsara kokoa sy haingana amin'ny fiovan'ny hazavana. Raha toa ianao manondro ny iPhone X ao amin'ny faritra iray somary manjavona, dia makà haingana haingana any amin'ny faritra voatanisa amin'ny lanitra maitso, ho hitanao ny fanitsiana fakantsary. Ao amin'ny Xs, tsy dia hita loatra io fanitsiana io.
Ny famatsiana ao anatin'izany rehetra izany dia fiovana lehibe roa amin'ny fanitsiana sary. Voalohany, nahazo alalana ny algorithm HDR ny iPhone. Ankehitriny dia antsoina hoe Smart HDR izy io, izany dia haka valo valo raha tokony ho efatra amin'ny fotoana handosirana ny bokotra fanontana. Izany dia manampy ny fakàn-tsary hahazoana sary tsara kokoa amin'ny hazavana mamirapiratra - sary an-tsoratra, ohatra.
Misy sary hoso-doko manatsara kokoa amin'ity indray mitoraka ity koa. Raha tokony hanapa-kevitra aminao ny habetsaky ny fangatahana hampihatra eo amin'ny fototra, dia mahazo fahafahana hanitsy izany ianao aorian'izany. Toy ny hatramin'izay ity karazana sary ity dia toa manohina ny fon'izy ireo, azo antoka fa raha ampitahaina amin'ny zavatra tena izy. Mahazo ny marina rehetra anefa, ary afaka mandresy lahatra ny valiny.
Apple iPhone Xs dia mijery: Software
Mazava ho azy fa iray amin'ny hafa, ary ny tena lehibe, ny endri-javatra vaovao ao amin'ny iPhone Xs dia iOS 12. Tsy hapararako ny zava-baovao rehetra eto, satria aho no manamboatra izay nosoratana tamin'ny resadresaka 12 an'ny iOS.
Raha lazaina anefa, dia misy fiheverana vitsivitsy miavaka. Tiako ny endriky ny New Screen Time, izay ahafahanao mitazona an-tampon'ny fampiasana ny smartphone na ny fanararaotana anao. Ny fampihetsikana fohy vaovao dia manintona ihany koa, manampy ny haavon'ny automation amin'ny IFTTT amin'ny iPhone, ary mamela ireo mpampiasa hametraka macros ary hampiditra sary miafina amin'ny birao na ny andian-teny fohy mankany amin'i Siri.
Apple iPhone Xs mamerina: didim-pitsarana
Ny Apple iPhone Xs, toy ny Xs Max, dia smartphone tsara tarehy. Raha mpankafy mpihinana iPhone mafy ianao fa aleonao mijery kely kokoa, dia tsy ho diso fanantenana ianao.
Manana fiainana an-tsarimihina tsara kokoa noho ny iPhone X, fakantsaratsaratsaratsara kokoa miaraka amin'ny saripika sary tsara tarehy, HDR fahaizany ary lahatsary, ary koa mpihira haingana kokoa. Raha avy amin'ny iPhone 7 na 6 ianao, dia mbola dingana lehibe kokoa izany.
Raha mba nanana ny vola aho anefa, ary hanao ny safidy amin'io sy ny iPhone Xs Max, dia io no farany farany isaky ny fotoana. Lafo be, eny, nefa tsy lafo be. Raha handany vola be amin'ny findainao ianao, dia mety handeha ihany koa. Inona ny £ 100 eo amin'ny namana, na izany aza?
Apple Watch 2 dia mety ho tonga ao antenatenany hatramin'ny farany-2016
Vetivety dia tonga any amin'ny iPhone ny fakantsary fakantsary matrice
Ahoana ny fametrahana ny iPhone na iPad anao amin'ny fomba famerenana amin'ny laoniny
Roambinifolo Roambinifolo no namoaka bokim-bokin'ny boky sy ny zava-baovao rehetra ho an'ny iPhone 7
Apple Store dia mamela ny mpampiasa hampiara-pefy ny iPhone amin'ny findainy ho an'ny iray vaovao
Ahoana no itantanana ny Widgets amin'ny iPhone?
Ahoana no fomba ahafahako maka sary 360-Degree amin'ny Facebook?
Ahoana no hizarana lahatsary miaraka amin'ny AirDrop amin'ny iPhone na iPad
Windows Phone famerenana fikarohana OS X rafitra fifamoivoizana bilaogy SSH Malagasy Bible PDG IP adiresy Command Ubuntu API YouTube Cortana Toetoetra Plugins Support PPA Plugin Windows 10 Samsung famotsorana finday avo lenta PHP SEO 04 fitaovana finday Time endri-javatra lalao Performance haino aman-jery sosialy Facebook fitaovana GNOME nbsp MAMAKA taona Apps raki-daza Fitaovana finday takelaka fikirakirana Phone Microsoft app store One ' Rafitra fikirakirana web browser ram Users CentOS 7 Database Chrome SSD Company bilaogy Samsung Galaxy rindrambaiko fitaovana afa-po HTTPS Up " WordPress File Video toe-tsaina 10 HTML lalao "PC HTTP fitaovana Ubuntu 16 Unix Microsoft Windows command line Bing Ubuntu 14.10 Apple Watch Windows 8 tahirin-kevitra Nginx 'App USB Linux Mint fanamarinana Ubuntu 14.04 hametraka paoma Firefox Server Google CentOS Apache ubuntu 15.04 Screen Windows windows update Unité centrale MySQL iPhone Android Debian vaovao farany web server loharano misokatra Twitter Linux Ubuntu Systems Linux